सामाजिक सञ्जालमा भाइरल, प्रहरीले कुटपिट गरेको घटनाको वास्तविकता(भिडियोसहित) - TV Annapurna
September 20, 2018 October 16, 2018 Annapurna TV
विनोद देवकोटा, टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौँ ।
एक जना मानसिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेलाई स्थानीय व्यापारी र प्रहरीले पिटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । काठमाडौँ चक्रपथ अन्तरगत गोंगबु शिव मन्दिर छेउमा एक जनालाई मरणासन्न गरी कुटपिट भयो । कानुनका हिमायती नेपाल प्रहरीका हवल्दारबाटै उनले मरणासन्न कुटाई खाए । काठमाडौँ प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्क बालाजुमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार हरिलाल विकले मानसिक र शारीरिक रूपमा समेत कमजोर देखिने ती व्यक्तिमाथि लात्ती र लाठी बर्साए । उनलाई साथ दिए केही स्थानीयले । हेर्दा आङ नै सिरिङग हुने गरी ती मान्छेलाई पिटियो । एक जनाले मात्रै होइन । आसपासका आधा दर्जन व्यारीले जे भेट्यो त्यसैले पिटे । हात, खुट्टा र आसपासमा भेटिएका विभिन्न वस्तुले उनलाई प्रहार गरियो । मानवअधिकार त परैको कुरा भयो कसैले मानवियताको समेत ख्याल गरेनन् । पिट्नेले पिटे । बाकीले हेरे । पिटाई खाने ती मान्छे को थिए भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । कसैले खोजी पनि गरेनन् । यतिसम्मकी प्रहरीले समेत सोध खोज गरेन वा गर्न आवश्यक ठानेन ।
गौंगबुमा कपडा पसल गर्ने एक जना व्यापारी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत बिहानै पसल खोल्न निस्किए । पसल पुग्दा एक जना मान्छे उनको पसल अघि थिए । उनका अनुसार पसल खोल्नु पर्ने भन्दै उनलाई हट्न भनियो । तर ती मान्छेले मानेनन् । आसपासका मानिसले पनि उनलाई पछि हट्न आग्रह गरे । तर पनि उनले मानेनन् । त्यसपछि आँखा गयो चक्रपथमा हिँड्दै गरेका एक प्रहरीमा । उनी थिए प्रहरी हवल्दार हरिलाल विक । गोंगबु प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कमा कार्यरत हवल्दार विकलाई त्यहाँ बोलाइयो । उनी त्यहाँ पुगे । व्यापारीको आसा थियो प्रहरीले उनलाई सहजै हटाउँलान भन्ने । तर त्यसो भएन । प्रहरी पुगेको ठाउँमा शान्तिपूर्ण र सुझबुझमा सल्टिन सक्ने एउटा सामान्य घटनाले त्यसपछि उग्र रूप लियो । उनीमाथि लट्ठी र लात्ती बर्साइयो । स्थानीय व्यापारीले समेत मौका कुरेर बसे झैँ गरी प्रहरीको प्रहारपछि थप प्रहार गरे । प्रहरीले बुटले हाने। लात्ती बझारे र डण्डा पनि बझारे । सँगै साथ दिए स्थानीयले । व्यापारीले पनि जे भेट्यो त्यहीले कुटे । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको भिडियो र स्थानीयका अनुसार पनि उनलाई अस्वाभाविक रूपमा कुटियो ।
नाम, ठेगाना, कहाँबाट आए ? किन आए ? कसैले साधेनन् । सबैले हाने मौका पाए जति । जे भेट्यो त्यसैले । यही हो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको र वास्तविक भएको पनि । तर यो सँगै उनीमाथि लाठी बजारिनु अघि पनि केही भएको रहेछ जुन सञ्जालमा देखिएन । स्थानीय व्यापारी बस्नेतका अनुसार उनलाई पसल अघिबाट उठ्न प्रहरीले आग्रह गरे । तर उनले मानेनन् र प्रहरीमाथि नै अपशब्द गरे । ती व्यापारिकै शब्दमा ती मान्छेले प्रहरी माथि नै हात उठाए । प्रहरीको गाला तात्ने गरी ती व्यक्तिले हानेको उनले बताए । त्यसपछि प्रहरीको पारा तात्यो र सुरु गरे लात्ती र लट्ठी बजार्न । प्रहरीले नै उग्र रूपमा पिटेको देखेपछि स्थानीय वन्यपारिले पनि पिटे । संयमित हुनुपर्नेमा प्रहरीले नै उनीमाथि जुत्ता र लाठी बजारेपछि रोक्ने कोही भएन । उनलाई निरन्तर कुटियो र त्यहाँबाट लत्याउँदै लगियो । तर भिडियोमा हेर्दा उनी प्रहरीलाई पिट्न सक्ने र बलिया देखिँदैनन् । घटना मङ्गलवार बिहानको हो । संयमित हुनुपर्ने प्रहरी नै आक्रामक भएपछि आफूहरू पनि उत्तेजित भएको स्थानीय व्यापारीले स्वीकारे । उनले भने अलि संयमित हुन पर्थ्यो । त्यो प्रहरीमा पनि देखिएन । हामीले पनि संयमता अपनाउन सकेनौँ ।
उनी को थिए । कहाँबाट आए । त्यसपछि त्यो खोजी न प्रहरीले गर्‍यो न स्थानीय व्यापारीले । एक जना व्यापारिका अनुसार उनी सोही दिन अबेरसम्म त्यही आसपासमा देखिएका थिए । उनले आफूले काम गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताउँदै हिँडेको ती व्यापारीले बताए । तर कहाँ र को सँग पैसा लिन बाकी थियो त्यो उनले पनि थाहा पाएनन् ।
घटनाले हामीलाई पनि असजिलो महसुस भएको छः गोंगबु प्रहरी प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक मोहन विक्रम केसी
गोेंंगबु प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कमा कार्यरत ती प्रहरीबाट यस्तो खालको अमानवीय व्यवहार भएको प्रति प्रहरी प्रभाग गोंगबु प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक मोहन विक्रम केसीले पनि दुख व्यक्त गरे । नेतृत्वको निर्देशन अथवा जानकारी बिनै निज हरिलालको आक्रोशले त्यो घटना भएको उनले बताए । उनले भने, ‘मैले पनि यो घटना मिडियाबाटै थाहा पाएको हो । विभिन्न समय र क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा हुने यस्ता घटनाले सङ्गठनलाई नै असर गर्छ । उनका अनुसार प्रहरी हवल्दार विकलाई विभागीय कारबाहीका लागि महानगरीय बृतमा तानिएको छ ।